Uncategorized Archive - IVANCH
Ukukhuluma ngezinto ezimbalwa ezithinta ibanga lokufunda lemikhiqizo ye-UHF RFID
Ukukhonjwa kwe-Radiofrequency (RFID) ubuchwepheshe bokuxhumana ngaphandle kwamacingo obukhomba imigomo ethile bese ufunda futhi ubhale imininingwane ehlobene nezimpawu zomsakazo ngaphandle kokuthola ukuthintana okukhona noma okubonakalayo phakathi kohlelo lokuhlonza nezinhloso ezithile. Uhlelo lwe-RFID ngokuvamile lwakhiwa izingxenye ezine: omaki be-elekthronikhi, izinzwa, abafundi kanye nesoftware application. Ngoba ubuchwepheshe bokuxhumana obungenantambo, it is…
Mayelana nokusetshenziswa kwamathegi wetshezi le-UHF RFID
Njengoba sonke sazi, izinsimbi kanye notshwala yimikhawulo yobuchwepheshe be-RFID radio frequency technology. Noma kunjalo, izinto zensimbi zingalawulwa ngamathegi e-anti-iron, kepha ukungenelela koketshezi akuxazululwa ngendlela enhle. Umzimba womuntu uzokwamukela i-radiofrequency micowaves, noketshezi nezinsimbi akunakungena kwisiginali yamaza omsakazo, so the application of RFID…